VPM Botozaza Pierrot : «ataovy mialohan’ny 26 Jona ny fihaonana » – MyDago.com aime Madagascar
Namaly avy hatrany ny voalazan’ny Ministry ny raharaham-bahiny ao amin’ny tetezamita, Rajaonarivelo Pierrot mikasika ny fanatanterahana ny fihaonana aorian’ny 26 jona ny Praiministra lefitra misahana ny toekarena sy Indostria Botozaza Pierrot avyamin’ny Ankolafy Ravalomanana io hariva io tetsy Anosy. Nisaotra ny Sadc ny Ankolafy Ravalomanana, hoy izy amin’ny fanapahan-kevitra izay nataony ny 01 Jona teo. Ao anatin’io fanapahan-kevitra io hoy Botozaza dia mazava ny tenin’ny Sadc fa fivoriana maika izany hoe tsy tokony iandrasana ela intsony ny fihaonana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy Ingahy Rajoelina. Mikasika ny hoe aorian’ny 26 Jona dia nambarany fa mifanohitra amin’ny zavatra notapahan-dry zareo tany Lwanda izany. Ny fanirian’ny Ankolafy Ravalomanana, hoy izy dia alohan’ny 26 Jona no tanterahana izany fihaonana izany satria tsy maharitra intsony ny vahoaka izay efa mahantra. Io no hitan’izao tontolo izao fa hamahana ny olana haingana. Momba ny hoe manao fety am-pilaminana dia mifanohitra amin’izay ny an’nyAnkolafy Ravalomanana, hoy Botozaza satria fomba ahoana no ahafahana manao fety amin’izao toe-draharaha izao. Mba hananan’ny vahoaka fanantenana dia alohan’ny 26 jona no atao. Mikasika ny voalaza fa avyamin’ny Governemanta fampiraisam-pirenena no nanaovana ny fanambarana dia nilaza ny Praiministra lefitra Botozaza fa ny Ankolafy Ravalomanana dia tsy naheno hoe nisy filankevitry ny Governemanta na ministry notanterahana kanefa izahay eto foana.Noho izany hoy izy dia hevitr’olon-tokana iny ka mbola hita taratra ny fanjakan’olon-tokana. Araka ny fanazavana ihany dia tsy mametraka olana hanatanterahana ny fihaonana ny Ankolafy Ravalomanana raha ny voalazan’i Botozaza, na eto an-toerana na any ivelany. Ny zava-dehibe hoy izy dia fahombiazana eo amin’izy roalahy. Anisan’ny nanontanian’ny mpanao gazety ny Praiministra lefitra misahana ny toekarena sy ny Indostria Botozaza Pierrot, ny momba ny hoe tsy nisy vokany ny fiatoana nataon’ny Ankolafy tao anaty rafitra. Nisy hoy izy ny vokany satria tsy hoe fitiavan-tenan’ny Ankolafy no tsy ahatongavany tao fa filazana amin’ny fitondrana ny tsy mety. Nisy ny fotoana tsy nanajana ny tondrozotra ary ny zavatra nosoniavina androany dia tsy ekena rahampitso. Zavatra telo fotsiny no angatahanay Ankolafy Ravalomanana hoy Botozaza dia ny fiverenan’ireo sesi-tany politika any ivelany, ny fametrahana fitoniana, ny fanajana ny zon’olombelona dia ny fahalalahan’ny maneho hevitra sy ny famoahana ny gadra politika. Tsy misy anefa ao anatin’ny tondrozotra milaza hoe andraso kely na rahampitso ny fampiharana izany. Ny olana dia tsy sahy mandray andraikitra ny mpitondra fat. Namafisiny fa tsy mety ihany koa ny hanaovana ny fifidianana amin’izao fotoana izao raha tsy milamina ny fitondram-panjakana, ary tanterahana ny tondrozotra. Ny momba ny hoe tsy mahazo milatsaka ny filoha Ravalomanana dia nambarany fa voalazan’ny lalam-panorenana dia afaka milatsaka avokoa ny olom-pirenena rehetra, ary avelao ny vahoaka hifidy malalaka.
Momba ny raharaha TIKO dia nambaran’ny Praiministra lefitra misahana ny toekarena sy Indostria Botozaza fa misy ny lafiny teknika izay mahagaga ihany fa raha nihetsika ny DGI manao fisafoana ary namoaka mari-bola 172 miliara ariary ho an’ny vondrona TIKO. Ny any Antsirabe sisa anefa no nitsangana hoy izy kanefa mbola asaina mandoa vola. Tsy manaiky izany izahay fa aza potehina ohatr’izany ny orinasa , aza hijerena hoe Ravalomanana hoy ny fanazavana. Sarotra ny mampisaraka ny TIKO amin’ny filoha Ravalomanana satria rehefa mihetsika ny TIKO dia mikitika ny Filoha Ravalomanana.
Mikasika ny fandriampahalemana dia nambarany fa tongo-bakivaky ka sady maharary no mahamenatra indrindra ny zavanisy tany Amboasary Atsimo ka nahafaty miaramila.Tsy voafehy mihitsy hoy ny VPM Botozaza ny lafiny filaminana eto amintsika. Tsy mbola nisy teto hatramin’ny nahazoana fahaleovantena ny toy ireny. Dikan’izany dia marefo ny filaminana. Nanafatra ny tomponandraikitry ny filaminana ny tenany hoe aleo hiparitaka ny hery fa aza havangogo eto an-drenivohitra.
Auteur Solo Razafy*Publié le 13 juin 2012 13 juin 2012 Catégories Politique
23 réflexions sur « VPM Botozaza Pierrot : «ataovy mialohan’ny 26 Jona ny fihaonana » »
zazabado dit :
dia mihevitra an,dry hat ho « zaza » mihitsy i » boto » an!
Zaza alika tsy faka taranaka raha izay fakon’olona toa itony foza orana mianakavy.
Dia mbola azo hatao ihany ve ny mbola hidinika @’ izay fakofakon-draha iny @’izao toe-draharaha izao e!!
Botozaza aza efa mipararetra fa na ny mandeha any @ Banky aza efa tsy azo diavina na dia tsy haka vola aza
sao hisy hanafika avy eo.Sambany izy vao niteny io an!! efa hatomotra ny ranombary.
Mirongatra ny dahalo any TOLAGNARO ary maro ny pitandro filaminana no maty tsy hita ny FATINY hatr@’izao izay
nanaovan’ireo dahalo azy , nefa ny FETY @ 26juin no mahamay ny FOZA , MILA SORONA ny devoly hanakanana an’i
fahatongavan’i dada ka lasibatra indray ny GASY e!!!
rainivalona dit :
13 juin 2012 à 18 h 52 min
unilateraly io satria tsy nivory tao zahay!andraso eo dada!aza mivory ihany fa les absents ont tjrs… raison;dia ataovy alohan,ny 26 jiona ny fivorianareo fa inona no hiandrasana an,io laikely maditra io!anao anie BOTO tsy ZAZA intsony e
Hi!hi!hi!!!POV CON!!!POV FOZA!!!!
13 juin 2012 à 19 h 15 min
Efa dingana iray izao ataon’i Botozaza izao nefa raha ny toe-java-misy dia fotoanan’ny pressions izao fa tsy teny malefaka tsy ahitam-bokany intsony. Ianareo anie ao anatin’ilay rafitra e! Mihodina ianareo dia mihodina, adinonareo ambakan’ny tanjona: Ravalo mody. Tiavà hoa ny tanindrazana.Io seza io ho azo ihany!Ny ataon’ilay zandrikely ary efa tsy fidiny.
manahirana mihitsy ny manitsy ny malagasy. Hamoronan’ny tay sy hirotra hevitra dia iny koa mirongatra daholo. Ataony miankavia dia manaraka, miankavanana dia roso koa, asaina mihemotra dia mitodi-damosina.
Tsy misy miraharaha izany fihaonana izany fa miverina an-tanindrazana i Ra8 dia IZAY IHANY.
Raha toa ka tokony nihaona ary fa naninona no tsy natao hatramin’izay volana sy taona maro izay ????
Aza misary adala amin’ny adala ianareo ary mba miangavy tompokovavy, tompokolahy, fa samia miheritreritra izay fomba hiverenan’i Ra8 eto.
Aza manaiky arirarira fa mahavaky fo, mandrovitra ny vavony ary mampangaro-tenda.
Mba Tadidio fa ny kirizy eo ihany saigy olona maro dia maro no efa lasa adaladala.
Ataon’ny olona faneso sy fihomehezana ny zanako mipetraka any lavitr’any k’ity: ny prezidà-nareo hoy ny olon hon toa MPILALAO RADIO no traikefany!!!!
Grave be zany an: TSY MILA ANDRY RAJOELINA oa!!!!!
The elected président MARC RAVALOMANANA has to be our homeland before the independance day!!!!!
13 juin 2012 à 22 h 36 min
Miverina enao dada an,
fa tena MAMONO ny hasin’i Gasikara maneran-tany
ny endrik’ireto PUTSHISTES ireto
14 juin 2012 à 3 h 02 min
Fa mbola tsy leo ve isika e , ataon’i domelina sonia foana izay any ivelany any , avy eo hifirany indray , noho izany aty mada ny fihaonana BASTA
elas maranintsaina a. Dia mbola tsy takatrao ihany ve fa i de8 andriamanitrareo no nandadilady sy nangataka io fihaonana io mba hifonana am rajoely, ary mitomany any am sadc nefa tsy asian’ny olona sira, satria efa mitady ho voadaka any sudaf.
Iza no voadakan’i Ban Ki Moon tany New-York, sy nandadilady tany Luanda ka mbola nahazo felaka ihany koa ?
Io fihaonana io tsy maintsy atao, satria ny CI no manery ny tsy maintsy anaovan’azy !
Raha vao tsy manaiky an’io i domelina, izay efa nanao fanambaràna fa hanaraka ny torimarika nomen’ny CI, dia ho avy ny anganony ary hahita !
Noho izany, aza mirediredy ry foza fa efa fantatry ny olona fa mivalan-drano ianareo izao ! Couche vidiana, ary mandehana misasa fa mamofona laotra !
Hiomehezan’ny olona ny malagasy ry HoAiza noho io domelina io â ! Ny afrikana moa dia tsy lazaina intsony ny vavany ! Mbola tsy misy vahoaka vendrana toan’ny malagasy hono, manaiky zavatra tsy tokony ho ekena !
Raha dinihina dia mety ho marina ihany izany !
mba Tanora ihany ve dia lany andro miesona e!
mba sokafo ny maso, omeo labozia ny saina, dia ampiasaho ny tanjaka sy hery fa aza manao resaka tsy mitombona sady mandany andro.
ny foza raha tsapanareo dia be kabary am-bava fa sady tsy misy lohany no tsy misy vodiny.
Ny be resaka hono kely fisainana, tsy mieritreritra fa miradarada.
ireo foza be ireo ilay mibakabaka fotsiny fa tsy mandeha lavitra;
Ny zavatra mazava dia ny foza no mivaro-tena mampitonatonana, hihomehezan’izao tontolo izao. Hoy ny vahiny, mpampanao valse ve no hitondra firenena ? Mifandrobaka ny vahiny mandalo eto amin’ny firenenana manaraoraotra mangalatra fa ny foza bado be tsy mahita ny fetsy.
Rehefa mahazo tsipiranon-dolana kely ireo dia mionona e!!
dia ny @’milliara an’ny MPANJANAKA vahiny fa ny Gasy tompony no MIKOKOKOKO.
Iza moa no nahatonga an’izany ry Kintana fa tsy ny MPITARIKA ny ankolafy Ra8, izay nanaiky sy nanao sonia fa
DOMELINA DIA FILOHAn’NY TETEZATAPAKA?????( tsy tė hiverina @’izany intsony aho fa sssssss).
Resaka ka atao ary faniriana ny an’ny vahoaka, fa tsy hisy fihaonana alohan’ny 26 juin izany eo ê !
Manao izay hiresahana ny tenany ny sasany !
Malahelo aho milaza an’izany, indrindra fa ho an’i HoAiza ! Ny tsara atao dia ny tsy mananga-tsaina ! Aza adino fa 26 juin efa efatra izao no hidedahany eny Mahamasina, ary hitenenany any an-tsainy any hoe, miasà mafy ianareo ry malagasy andevoko, fa tsy ampy ny hetra alohanareo hanaovako fety, ary indrindra ny vola mihiditra ato am-paosiko !
elas itony dia tena mitovy am ry de8 mihintsy, reefa tratra lay hevitra marivo-totra dia tsy mahatanty resy dia manao Bontolo fotsiny aiza no tsy hamono olona moa.
Taiza tokoa moa no mba nahaizan’ireto zanak’dada ireto hifanakalo hevitra izany.
Tsy mbola nahita an’ny de8 nandritra ny fitondrany na tam propagandy ka nanao debat tam olona tsy nitovy taminy, satria dia manao hevitra bontolo fa tsy mba misy qualite izany mihintsy.
ny tsy fahaizana miteny moa manginy fotsiny, frantsay zero, anglisy zaza T3, ny malagasy moa dia atao izay mampety azy fotsiny fa tsy mba misy soins hoatran’ny zandrikely.
Io fihaonana io dia izay tapakay mpanohana an’i Andry ihany no tsy maintsy arahina fa tsy izay fitakian’izao BOTO SY ADALA manao sain-JAZA rehetra izao e!
14 juin 2012 à 15 h 20 min
I Denise koa dia saim-boto mihitsy
MADAGASCAR DOES NOT NEED ANY Andry Rajoelina alike!
Itony zany ry kintana no mpanera « en nature » ho an’ny andevo’ny chair humaine?
Tsy maintsy efa tany mialoha, de sisa daba loaka masiso fivalanan’ny aretina…
Andry Rajoelina alike or alika ?
Tsy vitan’izay tsy ho vita alohan’ny 26 fa ny HIFARANA indray koa aza avy eo ny volana
mbola hiesona eto isika .
14 juin 2012 à 18 h 27 min
rahavao tsy atao @alohan,ny 26 jona io reunion io dia tokony hahemotra amin,ny heritaona 2011;
misy tanora tsy vory saina eto dia hoy aho hoe manonona no omena ordinateur ny ankizy mbola tsy ampy taona ? fa aiza ny ray aman-dreny mpitaiza ?
sa manao taizam-poza ?( mangalatra ny lehibe dia asaina manaram-po ny ankizy.)
ARY KOA LESONA OMENA MAIMAI-POANA ‘TY MINISTRY NY RAHARAHA-BAHINY ‘TY ,IZAY MITSAONTSAONA..
Ny feuille de route ho soniavina no rafitra hisolo ny lalam-panorenana
Ny fiahaonana nangatahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,izay nivantana any amin’ny SADC , dia ny SADC no tompon’ny fahefana manondro ny toerana , ny andro ary ny ora hanaovana izany…
Io fangatahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia mifantoka amin’ny
fanasoniavana aingana ny tondro zotra mba hafahana mametraka ny tetezamita ifanarahana..
IZANY HOE IO FANGATAHAN 4NY FILOHA RAVALOMANANA IO DIA TENA AO ANATIN’NY RAFITRA SADEC IZAY MISAHANA NYFANANTOTOSANA NY FAMETRAHANA NY TETEZAMITA..!
TSY MISY NA KELY AZA ANTONY HIDIRAN’NY MPANONGAM-PANJAKANA IZANY , SATRIA RAHA VAO NY
FANASONIAVANA NY TONDROZOTRA DIA TAPITRA EO NO EO IHANY NY FITONDRANA NANGALARIN-DRAJOLINA SY NY JIOLAHINY ARY NY JIOVAVINY !
..TSY HIRAVIRAVY TANANA ,
..TSY HANAIKY LEMBENANA NA HO FETSIFETSENA
..HIKIRY SY HIJORO LALANDAVA
..TSY HITSAHATRA MITOLONA
Précédent Article précédent : MAGRO BEHORIRIKA : AZA MANAIKY ATAO TSINDRIO FA LAVO ISIKA
Suivant Article suivant : FETIM-PIRENENA SY FIANDRIANAM-PIRENENA ?